September 9, 2017 - Page2of9- TV Annapurna
देशको अस्तित्व जोगाउन महत्वपूर्ण योगदान : प्रधानमन्त्री देउवा
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको अस्तित्व बचाइराख्न किसान वर्गको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभएको छ । ज्यापु समाज ललितपुरको आज २४ औँ वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उहाँले देशको गरिमालाई उच्च बनाइराख्न आम नेपालीको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभयो । किसान वर्गलाई समेटेर आफ्नो पहिचानलाई सधैँ बचाउन समाजको ठूलो भूमिका रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइे थियो । ललितपुरको कला, धर्म र संस्कृतिलाई जोगाइराख्न पाटनवासीले अतुलनीयरुपमा काम गरेकोेमा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । समाजको अगुवाइमा गरिब किसानको उत्थानका लागि गरेको कामप्रति उहाँले थप प्रशंसा गर्नुभयो । सो अवसरमा समाजको भवनमा अवस्थित संग्रहालयको प्रधानमन्त्री देउवाले अवलोकन…
बिपी नेपालकै पहिलो राष्ट्रियताको व्याख्याताः नेता पौडेल
तनुहँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिपी नेपालमै पहिलो राष्ट्रियताको व्याख्याता रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस व्यास नगरपालिका–१ को आयोजनामा १०४ औँ बिपी जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद नेपाली काँग्रेसको मूल विचार रहेको चर्चा गर्दै बिपीलाई देश र जनताले सदैव हृदयमा राख्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा काँग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अमरराज कैनीले ‘निर्वाचन र संगठन’, काँग्रेस तनहुँका सभापति बैकुण्ठ न्यौपानेले ‘आगामी प्रादेशिक र संघीय चुनाव’, जिल्ला सचिव विश्व बाँस्तोलाले ‘कार्यकर्ताको जिम्मेवारी’, जिल्ला सहसचिव केशबहादुर सुनारले ‘नेकाँ र दलित संघको भूमिका’, प्रशिक्षण…
मैथिलीलाई वैकल्पिक भाषाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने
विराटनगर। आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले मैथिली भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सबै एकजुट भएर अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘अप्पन विराटगढ परोपकार समाज’द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘जितिया पर्व’ समारोहको अवसरमा उहाँले मैथिलीलाई कामकाजी भाषाका रुपमा मात्र सीमित नराखी मुलुककै वैकल्पिक भाषाका रुपमा स्थापित गराउन अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल र भारतमा बोलिने मैथिली भाषा दक्षिण एशियाकै महत्वपूर्ण भाषाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मैथिली भाषाको विकासका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकका सबै भाषाको विकासका लागि सरकार अग्रसर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।…
इङ्गलिस प्रिमियर लिग: म्यानचेष्टर सिटी ५—० विजयी
इङ्गलिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबारको खेलमा म्यानचेष्टर सिटी विजयी भएको छ । सिटीले लिभरपुललाई ५—० को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । १० खेलाडीमा सीमित लिभरपुललाई हराउन सर्जियो अगुएरोको २४ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे । फरवार्ड साडियो मानेले सिटीका गोलरक्षक एडरसनलाई फल हानेपछि रेफ्रीले रातो कार्ड देखाएका थिए । पहिलो हाफमा २—० ले अघि रहेको सिटीका लागी दोस्रो गोल ग्यब्रिएल जिससले अतिरिक्त समयमा गरेको थिए । दोस्रो हाफमा उनकै स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका लेरोय सानेले २ गोल गरेपछि सिटी ५—० ले विजयी बन्न सफल बन्यो ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र जलस्रोत राज्यमन्त्री अमर सिंहलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । आयोगको बैठकले गच्छदारले वीरगञ्जमा गाडी तथा मोटरसाइकलहरूको र्‍याली निकालेर निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको जनाएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेवापत किन कारवाही गर्न नपर्ने हो ? २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाउने । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसँगै जलस्रोत राज्यमन्त्री मा. अमर सिंह पुललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । त्यीस्तै फोरम लोकतान्त्रिकका वीरगञ्ज…
नयाँ शक्ति र विप्लब समूहबाट माओवादी केन्द्रमा
भक्तपुर । नेकपा (माओवादी (केन्द्र) का नेता रामबहादुर थापाले आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नं २ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो हुने दाबी गर्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), भक्तपुरले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘बृहत राजनीतिक वैचारिक धु्रवीकरण अभियान’ कार्यक्रममा उहाँले अझैपनि प्रतिगामी, जमिन्दारी र पूँजीपति वर्गकै हातमा राज्य सत्ता रहेको भन्दै उहाँले जनताको हातमा राज्यसत्ता अझै नआएको जिकिर गर्नुभयो । माओवादी क्रान्ति अझै पनि अधूरो रहेको जिकिर गर्दै उहाँले क्रान्तिलाई प्ूरा गर्न देशव्यापी पार्टी एकीकरण अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार नभएसम्म देशको विकास…
सडकबाट खसेर दुई जना वेपत्ता
म्याग्दी | बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्रगत म्याग्दीको दाना काभ्रे भिर र भुरुङ तातोपानीमा सडकबाट खसेर २ जना वेपत्ता भएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालीका ३ दानाको काभ्रे भिर स्थित सडकबाट खसेर शनिबार दिउँसो एक भारतीय तिर्थयात्री र अन्नपूर्ण २ भुरुङ तातोपानीको भिरबाट मोटरसाईकल सहित खसेर अर्का एक नेपाली वेपत्ता भएका प्रहरीले जनाएको छ । सडक बिस्तार भैरहेकाले गाडी रोखिएको अवस्थामा झरेर पैदल हिडेर घाँसातर्फ जाँदै गरेका भारतको बिहारका ललन शर्मा खोचमा सडकको डिलबाट खोचमा खसेका हुन् । शर्माले लगाएको गलबन्दी भिरमा अड्किएको अवस्थामा देखिएको र उनको खोजीमा प्रहरी परिचालन भएको घटनास्थलबाट ईन्द्रसिङ शेरचनले…
नाकाबन्दी तोड्न कतारी राजाको सक्रियता
September 9, 2017 September 9, 2017 Annapurna TV
दोहा । साउदी अरब र कतारका नेताहरुले शुक्रबार कूटनीतिक समस्या समाधानका बारेमा टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको छ । यो कुराकानीसँगै उनीहरुबीचको सम्बादहिनता टुटेको छ भने टेलिफोनवार्ता सौहार्दपूर्ण भएको छ । कतारका राजा शेख तामिम बिन हमाद अल थानीले गरेको फोन अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले उठाउनु भएको साउदी अरबका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन । कतारी राजा हमाद अल थानीले तीन महिनादेखिको नाकाबन्दी सहितको तनावपूर्ण समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । टेलिफोन कुराकानीका क्रममा कतारका राजाले आफ्नो देशलाई नाकाबन्दी गराएका देशहरुसँग आफू वार्ता गर्न चाहेको बताउनु भएको थियो…
चन्द्रपुरमा नेकपा एमालेको घरदैलो तिब्र
रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुरमा नेकपा एमालेले घरदैलो तिब्र बनाएको छ । उम्मेदवारी दर्ता सगै मेयरका उम्मेवार उद्धव रेग्मी अहिले घरदैलोमा व्यस्त देखिन्छन् । एमालेका क्षेत्रिय अध्यक्ष बाबरराम दाहालले कोण सभामा एमाले लाइ कसैले हराउन नसक्ने भन्दै चन्द्रपुरमा एमाले बाहेक कुनै दलले जित्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन । यस्तै वडा नम्वर ५ मा वडा अध्यक्ष कृष्ण पोखरेलको टिम घरदैलोमा व्यस्त छन । वडा नम्वर ४ मा वडा अध्यक्ष अमर आलेको टिम बिहानै जंगलटोल, शान्तिनगर, मिलनचौक लगाएतको टोलमा घरदैलोमा छन । वडा नम्वर ६ का खड्ग कुश्वारको टिम पनि बजार, ठोकरटोल, लगाएतको…
२६ वर्षिय रञ्जुका १० बुँदे प्रतिबद्धता, सुशासन प्रमुख एजेन्डा
अखिलेश यादव रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी २६ वर्षिय रञ्जु गौतम तिमल्सिनाले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् । नयाँ शक्ति पार्टीबाट उपमेयर पदको उम्मेदवार बनेकी रञ्जुले पुराना पार्टीहरुको गतिविधिबाट दिक्क भएका जनतालाई नयाँ विकल्प दिनका लागि र नगरमा हुने सम्पूर्ण किसिमका अनियमितताहरुको अन्त्य प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले भनिन् स्वस्थ, पारदर्शी प्रशासन र सुशासन कायम गर्न मैले उम्मेदवारी दिएकी हुँ । उनले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा गर्ने प्रमुख कामहरुको सूचि सार्वजनिक गरेकी हुन् । ५ वर्षभित्र नगरका सबै वडाका सडकहरु स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्ने,…